KOOWHEEL hoverboard K8 ၏စျေးကွက်အားသာချက်များနှင့်အလားအလာ - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
1. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ခွင်ညှိ Scooter ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ status ကို
3. K8 စျေးကွက်အားသာချက်များနှင့်အလားအလာ
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်သုံးစွဲမှု၏အဆင့်မြှင့်တင်နှင့်တကွ, စွမ်းအင်သစ်ယာဉ်များ - ချိန်ခွင်လျှာကားများက၎င်း၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, စီးပွားရေးနှင့်အဆင်ပြေ features တွေအဘို့ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားစားသုံးသူချစ်မြတ်နိုးခဲ့ကြသည်, စားသုံးသူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝယ်လိုအားများအဆင့်မြှင့်တင်မှအကျိုးသည်ပင်လယ်ရပ်ခြားစျေးကွက်ကျယ်ပြန့်သည်, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာကိုခန့်မှန်းထားသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်သစ်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည်မျှတသောကားတစ်စီးကနေစမတ်ကားတစ်စီးအနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အဓိကဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်မှုနှင့်တင်ပို့မှုနှင့်အတူနိုင်ငံဖြစ်ပါသည် လျှပ်စစ်မိမိကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီ Scooter ကို Global Balance Scooter စက်မှုလုပ်ငန်း 90% အဘို့အစာရင်းကိုင်, ကမ္ဘာပေါ်မှာ။ သို့သော်ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာပြည်တွင်းစည်းမျဉ်းများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများမရှိခြင်း, မှ လျှပ်စစ် Scooter ထုတ်လုပ်သူ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးရရှိလာတဲ့အာမခံမထားဘူးထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်စံလမ်းညွှန်မှုမပါဘဲ, ကြီးကြပ်မှုမရှိခြင်း, ပြွတ်ကဲ့သို့စျေးကွက်, အ copycat, စျေးကွက်နှင့်အတူရေလွှမ်းနေသည် အတုနှင့်အညံ့ထုတ်ကုန်စားသုံးသူထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးခွဲခြားသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ တရားဝင်အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားများကိုအာမခံကြသည်မဟုတ်, ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကိုစားသုံးသူများထံသို့ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုကိုဆောင် ခဲ့. ယခင်နှစ်ကတစ်ဦးပြည့်စုံဖြစ်ပွားရှိသည်, အလေးအနက်ထားလျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter ရဲ့ပို့ကုန်ဆီးတားလေ၏။
အဆိုပါ fittest, ကောင်းသောအရည်အသွေးရှင်သန်မှုဟန်ချက်ကားတစ်စီး၏ကျန်းမာဖှံ့ဖွိုးတိုးတထိန်းသိမ်းရန်
အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းအရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလိုအပ်ကြောင်းနှင့်အသုံးပြုသူများကိုလုံခြုံရေးပေးနိုငျသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ချိန်ခွင်လျှာကားတစ်စီးစက်မှုလုပ်ငန်းနေဆဲအခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြေရှင်းရန်လိုအပ် Self-ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်ပထမဦးဆုံးအဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးပြောင်းလဲမှုနှင့်အောင်မြင်မှုများ, ရှာစက်မှုလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်နှင့်ပူးတွဲစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခုသာကိုင်သာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီး တင်းကျပ်သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများအောက်တွင်။ အပူဆုံး 6.5 လက်မသမားရိုးကျ၏အမြင်တွင် မိမိကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီ Scooter ကတော့အပေါ်ကိုရောင်း ချိန်ခွင်လျှာကားတစ်စီး ဈေးကွက်။ တဖကျတှငျမူစက်မှုလုပ်ငန်းစကေးလျှင်မြန်စွာချဲ့ထွင်, ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်ပေါ်မှာရှုပ်ထွေးယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်၏။ "လေ့လာမှုသင်တန်းအတွင်း၌တစ်ဦးကပုဂ္ဂိုလ်သတင်းထောက်ကမှဖော်ပြ။ ကြောင့်စံချိန်စံညွှန်းများမရှိခြင်း, အခြို့ လျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter ထုတ်လုပ်သူ ယုတ်ညံ့အစိတ်အပိုင်းများနှစ်ခုစုဝေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချဖို့တခြားနည်းလမ်းတွေသုံးပါကပြောပါရန်မချဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်, ဒီဆိုးယှဉ်ပြိုင်မှုကဤတရာယွမ်ဘီလျံ, တစ်ခုလုံးစက်မှုလုပ်ငန်းလျင်မြန်စွာသုညသို့ပြန်လာစေခြင်းငှါ , ချိန်ခွင်လျှာကားတစ်စီးစက်မှုလုပ်ငန်း၏စျေးကွက်အရွယ်အစားလည်း သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဤအစက်မှုလုပ်ငန်းများအပေါ်ပိုးမွှားဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ကောင်းတစ်ဦးချိန်ခွင်လျှာကားတစ်စီးစက်မှုလုပ်ငန်း၏ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KOOWHEEL နည်းပညာရုံယခုသုညမတော်တဆမှုအောင်မြင်ရန်, ပထမဦးဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမှလိုက်နာရန်လျက်ရှိသည်အထိသတ်မှတ်ထားခြင်းမှ, စားသုံးသူများ၏လုံခြုံရေးအတွက်လုံခြုံရေးပေးဖို့ကိုဘယ်လို။ ဘယ်လိုစျေးကွက်အပေါ်တစ်ဦး 6.5 လက်မယုတ်ညံ့ hoverboar နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မှု, ငါတို့မရှိတော့သမားရိုးကျ 6.5 လက်မမော်ဒယ်များဖို့မျှော်လင့်ပေမယ့် optimization နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ရွေးချယ်မှု, စားသုံးသူအသစ်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်း 6.5 လက်မ K8 ပေးရန် fittest ကိုးပွတ်တိုက်၏ရှင်သန်မှုမှ လျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter စျေးကွက်ဖြည့်ဆည်းဖို့သမိုင်း၌အဘယ်သူမျှမအပြိုင်ရှိခဲ့သည်ကသမားရိုးကျ 6.5 လက်မအစားထိုးမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်ကိုရပါလိမ့်မယ်တောင်း။
အီတလီနိုင်ငံမီလန်, အေးမြခြင်းနှင့်ထူးခြားသောအသွင်အပြင်, အထူးဖွဲ့စည်းပုံမူအရကဒီဇိုင်း, ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စားသုံးသူတွေကမျက်နှာသာပေးခဲ့ပါသည်။ အဟောင်းပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုချိုးဖျက်နှင့်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုများ၏အတားအဆီးကိုချိုးဖျက်
2. PCB Taotao ကို dual system ကို
Taotao သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီထံမှမွေးစား dual-system ကို Motherboard က။ စျေးကွက်စျေးပေါအမှတ်တံဆိပ်အမည်တစ်ခုတည်းစနစ်က Motherboard ကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်, Taotao, Dual စနစ်၏ပိုကောင်းတည်ငြိမ်မှုရှိပြီးအသုံးပြုသူများသည်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံဘေးကင်း၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရန်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။
Taotao Tech မှ: 1, PC မှာ, အဓိက, ဘုတ်အဖွဲ့, 2pcs, gyroscope အတူ။
3. Motors က
ဟောင်ကောင်ဟောင်ကောင် Motors ကအတွက်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားအရည်အသွေးမြင့်မော်တာအရည်အသွေးကိုအာမခံချက်ချောမွေ့စီးနင်းနှင့်မျှမဆူညံသံ၏အားသာချက်များရှိပါသည်။
ပါဝါကို type ကိုဘက်ထရီ, ကြာကြာဘဝ။ Koowheel K8 အာဏာဘက်ထရီထုပ်နှင့်အတူ 14 ပါဝါချွေတာရေး core ကို 24V ပြည်တွင်းဘက်ထရီကိုအသုံးပြုသည်, ရှည်အသက်နှင့်မီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, စမျးသပျခဲ့သညျ, ဝေးစျေးကွက် counterparts တွေကို 36V ချိန်ခွင်လျှာ Scooter ထက်ပြေးကြီးမားတဲ့ပါဝါ!
အဆိုပါဘက်ထရီ fireproof ပစ္စည်းကို လုပ်. , ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအသုံးပြုတဲ့ပျော့အထုပ်ထက်ပိုမိုလုံခြုံသည်
တစ်ချိတ်အမျိုးအစားခရီးဆောင်ကြိုးနှင့်အတူ, ကလှပအဆင်ပြေမြေပေါ်သို့ချနိုင်ပါတယ်, နှင့်သမားရိုးကျ 6.5 လက်မမျှမျှတတမော်တော်ယာဉ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမအိတ်ကိုနှင့်အတူသယ်ဆောင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်